विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रतिवन्धित समाचारमंगलबार, फागुन २८, २०७५
विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध राम्रो कार्यः सभापति देउवा विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग आज सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति तोडफोड, जनतामा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको कार्य उचित भएको प्रष्ट पारे । समाचारबुधबार, फागुन २९, २०७५
आगोमा बारुद हालेर निभाउने प्रयासः कार्की कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधीमागि लगाइएको प्रतिवन्धलाई ‘आगोमा बारुद हालेर निभाउने प्रयास’ को संज्ञा दिएका छन् । समाचारबुधबार, फागुन २९, २०७५
विप्लवमाथिको प्रतिवन्धः संविधानले के भन्छ? राज्य संयन्त्रले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विप्लवका कार्यकर्तामाथि बल प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार पनि राख्छ । सँगसँंगै संविधानले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक दलका रुपमा नै राखेका कारण ऊ सँग राजनीतिक व्यवहार गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भित्र पर्ने देखिन्छ । समाचारबुधबार, फागुन २९, २०७५
बम निष्क्रिय बम राखेको हल्लाले विभिन्न स्थानमा जानका लागि विमानस्थल पुगेका यात्रु, राँझा चोकलगायत आसपासका क्षेत्रमा त्रास फैलिएको थियो । बन्दका कारण बाँकेमा शिक्षण संस्था बन्द रहेका छन् भने लामो दूरीका सवारीसाधन चलेका छैनन् । समाचारबिहिबार, फागुन ३०, २०७५
विष्फोटमा संलग्न भएको आशङ्कामा दुई पक्राउ विष्फोटलगत्तै प्रहरीले १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक राठौरका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये सातलाई साधारण तारेखमा छोडिएको र अन्य तीनलाई थप अनुसन्धानका लागि राखिएको छ । आज थप दुई जना पक्राउ परेको उनले बताए । अनुसन्धान भइरहेकाले नाम गोप्य राखिएको छ । समाचारबिहिबार, फागुन ३०, २०७५
विप्लव र सिके राउतका विषयमा नेकपामा विवाद समाचारबिहिबार, फागुन ३०, २०७५
विप्लवको नेकपाः पार्टी कि समूह ? ४५ मिनेट लामो कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले आधा भन्दा बढी समय ‘विप्लव’माथि बोल्न खर्च गरे । मन्त्रिपरिषद् निर्णय को जानकारी गराएपछिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा धेरैजसो पत्रकारले विप्लवसँग नै जोडेर प्रश्न गरे । समाचारबिहिबार, फागुन ३०, २०७५
प्रचण्डको हत्या गर्ने योजना छैनः विप्लव उनले भने ‘प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफुलाई साम्राज्यवादीहरुले हत्या गर्न खोजेको भन्थे अब त्यो हत्या गर्ने योजना हामीमाथि थोपर्दै छन् । यो उनको पुरानै बानी हो ।’ आफुहरु जनक्रान्तिको बाटोमा लागेको बताउदै उनले यो वेला कुनै व्यक्ति र संस्थामाथि आक्रमण गर्ने नीति नभएको बताए । समाचारशुक्रबार, चैत १, २०७५
विप्लवका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएको छ । समाचारआईतबार, चैत ३, २०७५
कति छ विप्लवसँग हतियार ? क्रान्ति नगरेको भन्दै २०७२ साल मंसिर ८ गते मोहन वैद्यलाई पत्र लेखेर विप्लव अलग भएका थिए । हतियारप्रतिको मोह नभएको र अबको क्रान्ति तत्कालीन माओवादी जस्तै नहुने बताए पनि सुरक्षा चुनौती र अराजनीतिक गतिविधी भन्दै सरकाले यतिखेर प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । समाचारसोमबार, चैत ४, २०७५
विप्लवका १७ कार्यकर्ता पक्राउ पक्राउ पर्नेमा उक्त समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित रहेका छन् । मुलुकभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधिमाथि सुक्ष्म निगरानी गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षा सबल र सुदृढ पारिएको सुवेदीले जानकारी दिए । समाचार१९ घण्टा
यस्ताे छ विप्लवकाे संगठन संरचना प्रतिवन्ध लागेपछि पार्टीको सांगठानिक संरचना बदलेको नेकपामा विप्लव सवैभन्दा शीर्ष तहमा छन् । २४ वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) झै महासचिवको हैसियतमा उनले नेतृत्व गरिरहदा पार्टीले पाँच सदस्यीय स्थायी समिति बनाएको छ । समाचार१८ घण्टा
यसरी पक्राउ परे विप्लवका विश्वासपात्र ओली जेलबाट छुटेपछि प्रकाण्ड विप्लवसँग झन् आक्रोसित र असहयोग गर्न थाले । कयौं कुराहरु उनले विप्लवलाई नसोधेर नै गरेको विप्लव निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । समाचारशनिबार, चैत ९, २०७५
यस्ताे छ विप्लव प्रतिबन्धको गेम प्लान थापा घुमिफिरी प्रचण्डसँगै आए । प्रचण्डलाई लालगद्धार भनेका थापा अहिले गृहमन्त्री छन् भने उनको नजरमा विप्लव अहिले विध्वंसकारीमा दरिएका छन् । तर उनलाई विध्वंसकारी घोषणा गर्नुभन्दा पहिले वार्ताका लागि धेरै पटक सत्तारुढ नेकपाका नेताले विप्लवलाई भेटेका छन् । समाचारबुधबार, चैत १३, २०७५
विप्लवका नेता छुटाउन वलीकी छोरीको रिट वलीकी छोरी विपना वलीले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र ललितपुर जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ । समाचारबिहिबार, चैत १४, २०७५